Sheekh: Mac-hadka faafinta Islaamka oo kulan la xidhiidha fikirta Diinta ee is-qarxinta u qabtay Ardayda Dusgiga SOS | Xarshinonline News
Sheekh: Mac-hadka faafinta Islaamka oo kulan la xidhiidha fikirta Diinta ee is-qarxinta u qabtay Ardayda Dusgiga SOS
Sheikh,(NNN) Mac-hadka faafinta Islaamka ee ka hawlgala Somaliland, ayaa dorraad kulan-diimeed u qabtay ardayda Dugsiga sare ee SOS ee degmada Sheekh.
Kulankaas oo ka dhacay xarunta Dugsiga sare ee SOS, isla markaana ku saabsanayd fahanka saxda ah ee diinta islaamku ka qabto is-qarxinta, waxa ka qayb galay Guddoomiyaha Mac-hadka Faafinta Islaamka Sheekh Maxamed Cabdi Yuusuf (Mooge), Sheekh Saleebaan Siciid, Ardayda iyo macalimiinta Dugsiga.
Ugu horrayn waxa halkaa ka hadlay Guddoomiyaha Mac-hadka Faafinta Islaamka Sheekh Maxamed Cabdi Yuusuf (Mooge) oo ka warbixiyay Mac-hadka faafinta Diinta Islaamka. “Mac-hadkani waa mid diinta Islaamka fidiya, waxaanu wax badan ka qabtay wadamada Afrikada galbeed, maantana waxa farxad weyn noo ah in aanu la joogno ardaydan wax baranaysa ee dugsiga SOS.” Ayuu yidhi Guddomiye Mooge, isaga oo hadalkiisa sii wadana waxa uu intaa raaciyay oo uu yidhi, “Waxaan idin sheegayaa in Hay’addani u dhisan tahay in ay dadka ku wacyigeliso ha is-qarxinina cidna ha dilina, idinkuna ha is-dilina. Waxaana aad ogaataan in Dugsigan madaxda maanta wadankeena ugu caansani ay dugsigan sheikh ka soo baxeen, waxanan rajaynayaa in idinkana ay madaxweynaha mustaqbalku idinku jiro.”
Waxa kaloo halkaas muxaadaro diini ah ka soo jeediyay Sheekh Saleebaan Siciid, oo hadalladiisii ay ka mid ahaayeen, “Waxanan maanta idin soo gudbin doonaa sida islaamu ula dhaqmo dadka aan islaamka ahayn, waxana haboon in dhalinyaradu ay diinta si fiican u bartaan, si ay u kala saaraan dadka sharka xun wada ee halaynaya dhalinyarada ee odhanaya si aad janada u gashaan is-qarxiya, oo ku jano taga dadkaas halkaas jooga, waayo dhalinyaradii fikirka ay ku xadeen waxa weeye, idinku dadka meesha jooga wada qarxiya muslin iyo gaalaba ha ahaadaane waxa iman doonta in dadka halkaas ku dhintay loo kala saari doono niyadooda. Markaas taasi waa fakir liita, oo aan haboonayn.”
Isaga oo hadalkiisa sii wadana waxa uu sheekku ku daray “idinku ka SOS ahaan waa dhadhmiseen wax wax dila waayo waxa halkan lagu dilay malimiintii wax idin dhigi jiray oo aan waxba galabsan, taasina waa ta maanta ka jirta meelo badan oo ay wadaaan dad fakir aad u daciif ah wata oo runtii u bahan in laga hortago.” Waxaanu intaas ku ladhay oo uu yidhi “waxad maqlaysaan musaajid ayaa la qarxiyay, runtii taasi waa mid inagu cusub waayo marka la qarxiyo musaajid aamiintu ka baxayso waa mid aad u daran, una bahan in tashi iyo wacyi gelin xoog ah u bahan. walalayaal maanta farxad weyn ayay noo tahay in aanu horfadhiyo shabaabkii wadanka oo u tafo xaydan sidii ay wax u baran lahayeen.”
Gebo-gabadii kulan diimeedkaas waxa halkaas su’aalo diimi ah ku waydiiyay Sheekha muxaadirada jeediyay ardayda Dugsiga sare ee SOS.
Filed under diinta, waxbarasho
← “Raggii Cigaal ka hor yimi Inkaartiisii baa ku dhacday oo kuligood Daamur baa marsan”
Xubno ka Tirsan Xisbiga ANC ee dalka koonfurta Afrika oo ku Nuux-nuuxday Horumarka Somaliland →